Iwu kuki | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Banyere iwu kuki a
3 Gịnị bụ kuki?
4 Kedu ka anyị si eji kuki?
5 Kedu ụdị kuki anyị na-eji?
6 Kedụ ka m ga - ejide mmasị kuki?
Banyere iwu kuki a
Iwu kuki a na-akọwa ihe cookies dị na otu anyị si eji ha. Youkwesịrị ịgụ amụma a iji ghọta ihe bụ kuki, otu anyị si eji ha, ụdị kuki anyị na-eji ntụgharị, ozi anyị nakọtara na iji kuki yana otu esi eji ozi ahụ yana otu esi ejikwa mmasị kuki. Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu anyị si eji, chekwa ma chekwaa data nkeonwe gị, hụ Amụma Nzuzo anyị.
You nwere ike gbanwee oge ọ bụla ma ọ bụ wepu nkwenye gị na Nkwupụta kuki na weebụsaịtị anyị.
Mụtakwuo banyere onye anyị bụ, otu ị nwere ike isi kpọtụrụ anyị na otu anyị si ahazi data nkeonwe na Iwu Nzuzo anyị.
Nkwenye gị metụtara ngalaba ndị a: weaturalhealthdictionary.com
Kuki bụ obere faịlụ ederede eji eji echekwa obere ozi. A na-echekwa kuki ndị ahụ na ngwaọrụ gị mgbe ebudoro websaịtị gị na ihe nchọgharị gị. Kuki ndị a na-enyere anyị aka ime ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ọrụ nke ọma, na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị nchebe karị, na-enye ahụmịhe ọrụ ka mma, na ịghọta otú weebụsaịtị si arụ ọrụ na iji nyochaa ihe na-arụ ọrụ na ebe ọchọrọ ndozi.
Kedu ka anyị si eji kuki?
Dịka imirikiti ọrụ ndị dị n'ịntanetị, weebụsaịtị anyị na-eji kuki nke-atọ na nke atọ maka ọtụtụ ebumnuche. Kuki ndị mbụ na-adịkarị mkpa ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ọrụ nke ọma, ha anaghị anakọta data nke gị gbasara gị.
A na-eji kuki ndị ọzọ eji na weebụsaịtị anyị iji ghọta etu weebụsaịtị si arụ ọrụ, otu esi emekọrịta ihe na weebụsaịtị anyị, na-echekwa ọrụ anyị, na-enye mgbasa ozi dị mkpa maka gị, yana ihe niile ị na-enye gị nke ka mma. ahụmịhe onye ọrụ ma nyere aka mee ka mmekọrịta gị na weebụsaịtị anyị dị n'ihu.
mkpa: Somefọdụ kuki dị mkpa ka ị wee nwee ike ịchọta ọrụ zuru oke nke saịtị anyị. Ha na-ahapụ anyị ka anyị nwee nnọkọ ndị ọrụ ma gbochie ihe egwu ọ bụla. Ha anaghị anakọta ma ọ bụ chekwaa ozi nkeonwe ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, kuki ndị a na-enye gị ohere ịbanye na akaụntụ gị ma gbakwunye ngwaahịa na nkata gị na ndenye ọpụpụ na nchekwa.
Statistics: Kuki ndị a na-echekwa ozi dị ka ọnụọgụ ndị ọbịa na weebụsaịtị, ọnụọgụ nke ndị ọbịa pụrụ iche, nke ndị nleta websaịtị ahụ, isi mmalite nke nleta ahụ wdg. Data ndị a na-enyere anyị aka ịghọta ma nyochaa otú weebụsaịtị si arụ ọrụ nke ọma yana ebe ọ dị. chọrọ ndozi.
Ahịa: Ebe nrụọrụ weebụ anyị gosipụtara mgbasa ozi. A na-eji kuki ndị a iji hazie mgbasa ozi anyị na-egosi gị nke mere na ha baara gị uru. Kuki ndị a na-enyere anyị aka idobe arụmọrụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi ndị a.
Ndị ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ nwekwara ike iji ozi echekwara na kuki ndị a iji gosi gị mgbasa ozi na weebụsaịtị ndị ọzọ na ihe nchọgharị ahụ.
Ọrụ: Ndị a bụ kuki ndị na-enyere aka ọrụ ụfọdụ adịghị mkpa na weebụsaịtị anyị. Alitiesrụ ọrụ ndị a gụnyere itinye ọdịnaya dịka vidiyo ma ọ bụ ịkekọrịta ọdịnaya na weebụsaịtị na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mmasị: Kuki ndị a na-enyere anyị aka ịchekwaa ntọala gị na mmasị nchọgharị dịka mmasị asụsụ ka ị nwee ahụmịhe kachasị mma ma dị mma na nleta weebụ ga-eme n'ọdịnihu.
Kedụ ka m ga - ejide mmasị kuki?
Ọ bụrụ na ị ga-ekpebi ịgbanwe ihe ndị ị na-achọ ka emechara site na oge ị na-eme nchọgharị, ị nwere ike pịa taabụ “Nzuzo & Cookies” na ihuenyo gị. Nke a ga-egosipụta ọkwa nkwenye ọzọ na-enyere gị aka ịgbanwe mmasị gị ma ọ bụ wepu nkwenye gị kpamkpam.
Na mgbakwunye na nke a, ihe nchọgharị dịgasị iche na-enye ụzọ dị iche iche iji gbochie ma hichapụ kuki ndị nrụọrụ weebụ ji. Can nwere ike ịgbanwe ntọala nke ihe nchọgharị gị iji gbochie / ihichapụ kuki ndị ahụ. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara otu esi ejikwa ma hichapụ kuki, gaa wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.